Okuhamba phambili kwe-8-O-methylurolithin A powder (35233-17-1) - Umkhiqizi nefektri
ICofttek ingumkhiqizi wempuphu ohamba phambili wase-8-O-Methylurolithin A eChina. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enekhono lokukhiqiza lanyanga zonke elingu-100kg.
Imininingwane engu-8-O-methylurolithin A
Igama: 8-O-methylurolithin A
Chemical igama: I-Methylurolithin A
Indlela yamakhemikhali: C14H10O4
Umbala: I-Powder Ekhanyayo
Ukhiye we-InChi: /
Amakhodi we-SMILES: /
umsebenzi: I-8-O-methylurolithin A ine-anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-cancer, hypoglycemic neminye imisebenzi yezinto eziphilayo.
Isicelo: I-8-O-methylurolithin A sekufakazelwe ukuqala kabusha i-mitochondrial autophagy nokuguqula ukuguga kwemisipha.
Umswakama: I-Soluble ku-DMSO (3 mg / mL)